Izithakazelo Archives - Amaphupho Nezincazelo
Izithakazelo Zakwa Cele, Cele Clan Names, Cele Clan Praises
Nazo ke ezako Ndosi izithakazelo sinilethela zona ngokukhulu ukuzithoba bakwethu Ndosi,Nombedu,Khumbuza,Nkomo kayivuswa,Nkom’isengwa ilele,Wayisenga imile iyakhahlela,Squnga esihle esingahlalwa nyoni,Siqunga esizalela amasakabulaMkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni,Dubandlela,Vico akagezanga,Obuye nensil’emfuleni,Ngob’ethembe ukugeza ngobisi,Magaye,Magaye ongangolwadle! Kuthiwa indoda ayiqedwa nathi ke asinawo amandla okubaqeda oSiqunga esazalela amasakabula!
Categories Izithakazelo Leave a comment
Izithakazelo Zakwa Dlamini, Dlamini Clan Names, Dlamini Clan Praises
Ake sigagule izithakazelo zabantu bakwa Dlamini namhlanje bakwe. Nazo ke zihamba kanjena Sibalukhulu,Mdlovu, Magaduzela,Magaga kaNsele,Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwasa eyobayoba,Mgoqo ovimb’esangweni nansi impi,Izwe lafa ngathini na?Wena owabonela empunzini ukuthi kuyabalekwa ngoba yona yabaleka yaziphonsa ocingweni,Ngonyama! Bakwethu asibonge ngokunilethela izithakazelo zakwa Dlamini kanti abanye benu bona bakhetha ukuthi Dlamini clan names kodwa akusho lutho … Read more
Izithakazelo Zakwa Mthembu, Mthembu Clan Names, Mthembu Clan Praises
Ake sikuthi nje fahla ngazo izithakazelo zakwa Mthembu, phela laba abafundile ke bona sebathi Mthembu clan names. Noma ungakuqhamukela ngakuphi futhi kanjani kodwa konke nje kusho into efanayo. Mvelase,Qhudeni Mvelase,Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,Mvelase kaGuda,Ongawadl’amathibani,Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,Mnisi wemvula ilanga libalele,Ngoz’ovel’eNyandeni,Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,Nina baseMlamlankunzi! Asibinge nje ngokusivakashela la, ungagcini nje kanje kodwa uhlabe umkhosi nakwabanye bakwa Mthembu … Read more
Izithakazelo Zakwa Mbambo, Mbambo Clan Names, Mbambo Praises
Nazi ke izithakazelo zabantu bakwa Mbambo kanti abanye baye bathi Mbambo Clan Names Goba,Mdunge, Theneza,Mageza ngobisi lwenhlunu abanye begeza ngamanzi,Jangase!
Izithakazelo Zakwa Mncwango Clan Names
Mncwango Clan Names – Izithakazelo Ake sikuphe izithakazelo zakwa Mncwango abanye bethi nje Mncwango clan names ngolimi lwesilungu. Zihamba kanjena ke ezakwa Mjaji Mpangazitha Mjaji ka Ngotshana, Makhumbuza uthuli, Nsiba ka Muntsha, Dubeni, Wena owanyela emfuleni wenkosi wathi uyancwanga, Mpangazitha oziphangayo, Mzingeli kaMfekaye, Mncumbatha, Phakathi wako nkosi, Uma kukhona obona sengathi sikuvalele ngaphandle okubalulekile mayelana … Read more